Get Chance | FAQ
GET CHANCE ဆိုတာ ဘာလဲ?
GET CHANCE ဆိုသည်မှာ အခမဲ့ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးနေသော ၀က်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် GET CHANCE ၀က်ဆိုက် တွင် ရှိသော ဆုပစ္စည်း အားလုံးကို အခမဲ့ ကံစမ်း နိုင်ပါသည်။
GCMoney ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဆုပစ္စည်း များအား ကံစမ်းရန် အတွက် GCMoney မှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ် ပါသည်။ မိမိ ကံစမ်းမည့် ဆုပစ္စည်းပေါ်တွင် မူတည်၍ လိုအပ်သည့် GCMoney ပမာဏမှာ မတူညီနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ် ဒီဝက်ဆိုက်ကို အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ ရလား?
သင့်မှာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု ရှိရုံဖြင့် GetChance မှ ဆုပစ္စည်း များအား ကံစမ်းခြင်း နှင့် ရယူုခြင်း များကို အခမဲ့ ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ registration ပြုလုပ်ရတာလား?
အခမဲ့ registration ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သင် ဤလင့်ခ်တွင် (http://www.get-chance.asia/my/signup) register ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။
register အား ဘယ်လို ပြုလုပ်ရတာလဲ?
ပထမ - http://www.get-chance.asia/my/signup တွင် ရှိသော အဖွဲ့ဝင်ရန် မှတ်ပုံတင်ပါ နေရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်း၍ အကောင့်ဖွင့်ပါ။
ဒုတိယ - registration လုပ်ထားသော အကောင့်အား အတည်ပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ အီးမေးလ် ပို့ထားသည်ကို သင့် အီးမေးလ်တွင် စစ်ရ ပါမည်။ နောက်ဆုံးတွင်- အီးမေးလ်တွင် ပါရှိသော အကောင့် အတည်ပြုရန်အား နှိပ်၍ အကောင့်အား အတည်ပြုပါ။
Facebook ဖြင့် အကောင့်ဖွင့်မည်ဆိုပါက ဤလင့်ခ်တွင်နှိပ်ပါ။
registration ပြုလုပ် ပြီးနောက် အကောင့် အတည်ပြုရန် အီးမေးလ်အား မရခဲ့ပါ။
အကောင့်အတည်ပြုရန် အီးမေးလ် မရောက်ရခြင်းတွင် ဖြစ်နိုင်ချေ (၃)ခုရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ
(၁) အကောင့်အတည်ပြုရန် အီးမေးလ်များကို trash (သို့) spam ထဲသို့ ခွဲထားခဲ့ခြင်း။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာအား ပယ်ထားသည့် အီးမေးလ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း။
(၃) သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ မမှန်ခဲ့ခြင်း။
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာအား ဒီမှာ ရိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ အချက်အလက်အား ပြောင်းချင် ပါ တယ်။
ဤ စာမျက်နှာ (http://www.get-chance.asia/my/mypage) ၏ အောက်ဆုံးတွင် ရှိသော အချက် အလက် ပြင်မယ် နေရာတွင် ၀င်ရောက်၍ သင့် အချက်အလက် များအား ပြင်နိုင် ပါသည်။
ဆုပစ္စည်း ကံစမ်းသည့်အခါ ကျွန်ုပ်၏ မှတ်ပုံတင် အမှတ် ထည့်ရန် အဘယ် ကြောင့် လိုအပ် တာပါလဲ?
လူတစ်ယောက်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ အကောင့်ဖွင့်ခွင့် ရှိသည့်အတွက် တရားမ၀င် အကောင့်များစွာဖွင့်ခြင်းအား ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသူများမှ မှတ်ပုံတင်အမှတ်အား ထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကံထူးရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါက ဆုပစ္စည်းအား မှတ်ပုံတင်နှင့် တကွ ထုတ်ယူ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆုပစ္စည်း ကံထူးရှင်ဖြစ်ခဲ့ ပါက ကိုယ်စား ထုတ်ယူ၍ ရပါသလား?
သင် ဆုပစ္စည်း ကံထူးရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါက နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နှင့်တကွ ကံထူးရှင် ကိုယ်တိုင် ဆုပစ္စည်းအား လာရောက် ထုတ်ယူ ရပါမည်။
ဆုပစ္စည်း တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ကံစမ်း၍ ရနိုင်ပါ သလား?
ကံစမ်းရန် GC Money ပမာဏရှိပါက ဆုပစ္စည်းကို တကြိမ်ထက်မက ကံစမ်းနိုင် ပါတယ်။ ကံစမ်းမှု အကြိမ်အရေ အတွက် များလေ ကံထူးရှင် ဖြစ်နိုင်ချေ များနိုင်ပါတယ်။
ဆုရရှိသူ များအား မည်သို့ အကြောင်းကြား ပေးပါ သနည်း?
ဆုရရှိသူကံထူးရှင်များအား တိုက်ရိုက်မေးလ်ပို့၍ အကြောင်းကြားပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ဝက်ဆိုက်၏ ဆုရသူများ Page နှင့် Facebook Fan Page တို့တွင်လည်း ကြေငြာပေးပါသည်။
GC Money တွေကို ဘယ်လို ရရှိ နိုင်ပါ သလဲ?
GC Moneyရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်း ( ၃ ) ခုရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ -
(၁) နေ့စဉ် စက်ဝိုင်းလှည့်ခြင်းဖြင့် GC Money ရရှိနိုင်ပါသည်။
(၂) မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် GC Money ရရှိနိုင်ပါသည်။
(၃) သူငယ်ချင်းများကို Get Chance တွင် အဖွဲ့ဝင်ရန် Invite လုပ်ခြင်းဖြင့် GC Money ရရှိနိုင်ပါသည်။
(၄) ဆုပစ္စည်း page တွေကို Facebook တွင် Share လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း GC Money ရရှိနိုင်ပါသည်။
စက်ဝိုင်းကို တစ်နေ့လျှင် ဘယ်နှစ်ကြိမ် လှည့်လို့ ရပါ သလဲ?
GCMoney စက်ဝိုင်းအား နေ့စဉ် (၁)ကြိမ်သာ လှည့်၍ ရပါသည်။
မေးခွန်း တွေကို အမြဲတမ်း ဖြေဆို၍ ရပါ သလား?
မေးခွန်းများကို သတ်မှတ်ရက် အတွင်းသာ ဖြေဆို၍ ရနိုင်ပါသည်။ ရက်လွန်သွားသော မေးခွန်းများကို ဖြေဆို၍ မရနိုင်ပါ။
မေးခွန်း များကို တစ်လလျှင် ဘယ်နှစ်ခု မေးလေ့ ရှိပါသလဲ?
မေးခွန်းများမေးသည့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
သူငယ်ချင်း များကို ဖိတ်ခေါ်(Invite ပြုလုပ်) ရုံဖြင့် GCMoney ရရှိ နိုင်ပါ သလား?
သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ခေါ်(Invite ပြုလုပ်) ရုံဖြင့် GC Money မရရှိနိုင်ပါ။ ဖိတ်ခေါ်ထားသော သူငယ်ချင်းမှ GetChance တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်မှသာ GC Money ၃၀၀၀၀ ရရှိနိုင်ပါမည်။
ကံထူးရှင် ဖြစ်ခဲ့ပါက ဆုပစ္စည်းကို ချက်ချင်း လာရောက် ထုတ်ယူ နိုင်ပါ သလား?
ချက်ချင်း ဆုထုတ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။ Get Chance မှ လစဉ် ကံထူးရှင်အား ဆုပစ္စည်း ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို ပြုလုပ် လျှက် ရှိ ပါသည်။ ကံထူးရှင်များအား ဆုထုတ်ယူရမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာကို ပြန်လည် အ ကြောင်း ကြား ပေးသွားပါမည်။
သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လို ဖိတ်ခေါ်ရမလဲ?
သူငယ်ချင်း၏ မေးလ်လိပ်စာ သိပါက My Page တွင် ရှိသော သူငယ်ချင်းကို ဖိတ်ခေါ်မည်နေရာ ကို နှိပ်၍ သူငယ်ချင်း၏ မေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်း ပေးပို့၍ ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
ကံထူးရှင် ဖြစ်ပြီးသား သူများက နောက်ထပ် ကံထူးရှင် ထပ်ဖြစ် နိုင်ပါ သလား?
တစ်ကြိမ် ကံထူးရှင်ဖြစ်ပြီးသား သူများလည်း နောက်ထပ်ကံထူးရှင် ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Get Chance တွင် ၂၊ ၃ ကြိမ် ကံထူးသူများလည်း ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြား တွင် နေထိုင် သူများနှင့် နယ်ဝေး တွင် နေထိုင်သူ များလည်း ကံစမ်း နိုင်ပါ သလား?
လူတစ်ဦးလျှင် အကောင့် ဘယ်နှစ်ခု ဖွင့်လို့ ရနိုင်ပါ သလဲ?
လူတစ်ဦးလျှင် အကောင့်တစ်ခုသာ ဖွင့်၍ ရနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အခြားသော အမည် လွဲများ၊ မှတ်ပုံတင် အမှား များကို ဖြည့်စွက်၍ ထပ်မံ အကောင့် ဖွင့်၍ ရနိုင် သော်လည်း ထိုအကောင့်မှ ကံထူးရှင် ဖြစ်ခဲ့ပါက အချက်အလက် မမှန်ကန် သောကြောင့် ဆုထုတ် ယူ၍ မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အကောင့် ဖွင့်ရာတွင် ကိုယ်ရေး အချက် အလက် များကို အမှန်ဖြည့် ပေးရန် လိုအပ် ပါသည်။
Facebook ဖြင့် အကောင့် ဝင်ထား တဲ့သူ ဆိုရင် ကံထူးရှင်ဖြစ်ပါက Facebook အကောင့်ကို အကြောင်း ကြားပေးပါ သလား?
Facebook ဖြင့် အကောင့် ဝင်ထားသောသူ ဖြစ်ပါက ကံထူးရှင်အား facebook အကောင့် ဖွင့် ထားသော အီးမေးလ် ကိုသာ အကြောင်း ကြားပေးပါသည်။
GCMoney ကို သူငယ်ချင်းအား ဝေမျှလို့ ရ ပါသလား?
GetChance တွင် GC Money အား ဝေမျှသည့် စနစ် မရှိတော့ပါ။
ဆုပစ္စည်းတွေကို ဘယ်နေ့ မဲဖောက် ပေးလေ့ ရှိသလဲ?
ဆုပစ္စည်းပေါ်လိုက်၍ မဲဖောက်ပေးသည့်နေ့ မတူညီပါ။ မိမိ ကံစမ်းသော ပစ္စည်းပေါ်တွင် ကံစမ်းနိုင်သည့် ရက်နှင့် ကံစမ်းမဲဖောက်မည့် ရက်တို့ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးထား ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကံစမ်းနိုင်သည့် ရက် ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ကံထူးရှင်အား မဲဖောက် ရွေးချယ် လျှက်ရှိပါသည်။
မှတ်ပံတင်ကဒ် ပျောက်ဆုံး သွားပါက ဆုထုတ်ယူ၍ ရပါသလား?
မှတ်ပုံတင်ကဒ် ပျောက်ဆုံး သွားပါက ရဲစခန်းမှ မှတ်ပုံတင် ပျောက်ဆုံးကြောင်း တိုင်ကြား ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း နှင့်တကွ မှတ်ပုံတင် အမှတ် ထည့်သွင်း ရေးသား ဖော်ပြထားသည့် သက်သေ အထောက်အထား (လိုင်စင်/ရုံးဝန်ထမ်းကဒ်) များဖြင့် လာရောက် ထုတ်ယူ နိုင်ပါသည်။